Karter Braun - guru wavakasarudza Detective
Inonzi wavakasarudza yacho Detective Genre. Wakaenda nepiko munyori kuti kukodzera ichi "title"? Muna 1949, nokuti akanyora yokufungidzira yekutanga. Makore 30 mabhuku basa, akanyora zvinopfuura 270 mabasa. Of pavo - 261 whodunit, mamwe mabasa zvakanyorwa Genres siyana. By kugamuchira kuverenga chero bhuku Carter Brown, chete kuziva: haangavi kufinhikana.
Munyori wayo akanyora pasi mazita - Paul wekwaValdès Tex Conrad Sinclair McKellar, Dennis Sinclair, Karter Braun uye Tom Conway. The chipo emunyori zita - Alan Dzheffri Eyts. Akaberekwa muna London musi August 1, 1923. Akanga akadzidziswa muzvikoro zimbabwe. Pazera makore 19 ari refutenendi, akaenda basa Royal Navy. Pashure 4 makore basa Alan ndatomboenda pamudyandigere uye vachishanda nekambani Gaumont-British Films mu kurekodha Studio.
Muna 1948 Yates kuAustralia, vakagamuchira vokuAustralia citizenship uye kushanda kwemakore kuSydney Qantas vendege. Akanga akaroora Deniz Makkellar, aiva nevana vana mumhuri - Vanakomana vatatu uye mwanasikana. Pazera makore 61, 5 May 1985, munyori akafa.
Kutanga mabhuku basa
Achiri kushanda Manager, Karter Braun akaedza rwake panguva kunyora. Panguva iyi, akaedza pachake zvakasiyana Genres - westerns, "rinotyisa," renyaya. Vazhinji mabasa izvi zvakanyorwa pasi rekunyepedzera teks Konrad. Muna 1953, Alan akasarudza chinja zvachose kuti mabhuku basa. Kubvira ipapo, iye anonyora bedzi ari Genre kuti mutikitivha.
Ake basa rokutanga yokufungidzira "Venus unarmed", zvakanyorwa pasi rekunyepedzera pamusoro Karter Braun inotengeswa zvizhinji, uye vakauya kwaari mbiri. Makore mashomanana gare gare akabudisa imwe itsva pasi zita rake chairo, uye muna 1966 nhamba mabasa ake rakabudiswa pasi rekunyepedzera Carolyn Farr.
The mangwanani nemabasa Munyori ave vakatendeukira Australian vateereri. Asi pashure kwokubudisa New American Library akamukoka kuti pamwe, zita rake rakava kuzivikanwa muUnited States. Muna 1959, ake bhuku rakabudiswa muna France, mumitauro yakawanda uye Carter Brown anouya dzakawanda mukurumbira.
The naka nemabasa Carter Brown
Makore okutanga basa rake Karter Braun aishanda Genre kuti zvisingaitiki. Panguva iyi (1949 - 1953) yaiva pfupi nyaya enganonyorwa vanenge makumi maviri pasi rekunyepedzera Paul wekwaValdès. Vazhinji mabasa akanyorwa Genre munhu thriller vane zvinhu zvisingaitiki uye zvitendwa. Nezvadzo Hypnotic Death (1949), The Time Mbavha (1951) uye The Crook Ndiani haapo (1952). vavambi zvakaipa uye yakagadzirwa, nguva kufamba, X-ray chiratidzo uye Kusaoneka - mumabasa aya ose zvinhu yokunyepera.
Panguva iyo munyori akanyora akawanda renyaya nyaya pasi zita rake chairo. Zvikuru nomukurumbira pakati pavo - Girl kubva Galaxy X, A Space Ship Chinoshayikwa, Planet of Lost, Genie kubva Jupiter, mwarikadzi Space.
Pakazopera ake basa, Alan pakarepo anodzokera renyaya, kubva peni yake Coriolanus yokufungidzira, ngoro! - zvichida rinokosha basa, akanyorwa Genre. nganonyorwa iyi yakanga uncharacteristic zvidavado ake, zvikuru kusiyana ose rimwe basa. Zvichida ndosaka bhuku vakasangana nedzimwe akaipa, uye yakaramba kuzviona.
Detective Carter Brown zvemafaro isingatarisirwi zano dzinokanganisa uye rakaisvonaka pfungwa zvinosetsa nokukurumidza akawana mukurumbira, pasinei vamwe dzemakwiringwindi kumicheto. Munyori anoisa vacho mabasa ake zviri American upenyu, aiziva zvakawanda pamusoro vatungamiriri uye cinema. Asi vaverengi uchakanganwira iwane munyori vose upenyu uye akapfuma mutauro vatambi.
The chikuru zviri ndeake - laconic, kutsanya kukura chivande, pasina basa nezvehukorokodzwa. Pane zvakawanda nhaurirano ataura mutauro, zvinosetsa uye, chokwadi, magamba makuru. The heroine mabasa ake - nguva dzose "manune" uye kwezvokufuka nevakadzi, takaberekwa tine matarenda zhinji uye nemazango.
Matikitivha ari enganonyorwa Carter - nguva dzose "inotonhorera" vakomana vanoenda chero mamiriro ezvinhu asina kumbokuvadzwa. Dzimwe nguva vachiisa upenyu hwavo mungozi, anoratidza inorema mhosva. Asi, sezvo ari parumananzombe kuti Brown Book, zvose tsotsi zvakaita hunhu regai kunotadzisawo, uye organically yakarukwa kupinda chokurondedzera.
Vaverengi Kindle muna chido uye kuziva kuti vavabatsire kuti kuona uye kuverenga bhuku rimwe vachimedza, asi panguva imwe chete kuti kanganisa uye kutandara navo bhuku - zvakanga akakwanisa chete kuva nounyanzvi mutikitivha Karter Braun.
Books iyoyo mweya
matikitivha All Carter Brown "sungisa" muverengi. Hazvibviri kutsanangura chaizvo zvinokwezva, kumanikidzwa zvakare uye zvakare kunhonga bhuku uye kuzodzosera kuverenga. Anonzwa dzezviratidzo mhando, chido kuenda mhiri pfungwa uye kuti kusiyana, nokuda ine chido kudzoka kuverenga.
Munoziva kubva mitsetse rokutanga kumwe pedyo ari mashoko nhema mhinduro. Asi munyori nounyanzvi kunotungamirira kubva Zano nyaya uye chidzitiro amutswa chete okupedzisira mapeji. Zvahungava hwakaita zvakavimbika uye dialogs, zvishoma nezvishoma, danho nedanho, munyori kunotungamirira munhu chigadzirwa pfungwa. Akasiyana pfungwa maonero, zviitiko akadura akasiyana kumativi, nyoro ndyaringo, kusetsa ezvinhu akanyatsoratidza yakarukwa kupinda nyaya, vanova chinokosha payo. Somuenzaniso, bhuku "Imba uroyi."
Karter Braun uye yakajeka panguva imwecheteyo yakanyatsoita anoratidza hunhu protagonist. Verenga enganonyorwa uye murinde sezvo protagonist ari kuchinja - kubva impulsivity uye emotionality inoenda yakadzikama uye judicious chiito. The munyori akakwanisa kusimudza anoverengeka nyaya mubhuku zvakakodzera kufunga pairi. Books Carter Brown - uye uzivi, uye zvepfungwa, zvinosetsa uye nhamo, uye nhoroondo ...
Dan Abnett, "Horus Sunrise" (Horus ndichifumira): pfupiso
Runako mweya; mashoko uye nhetembo yavakuru
How kunyora yokufungidzira: apo kutanga, funga zita, nyaya
The nganonyorwa "Utsi": pfupiso. Turgenev NDIYE "Utsi": anoshanda ongororo
Pfupiso yebhuku "The Lower pakadzika" Maksima Gorkogo
"Kukurirwa" Fadeyev: ongororo uye pfupiso
Hotel Royal Palms Beach Hotel 5 * (Sri Lanka, Vaskudava): mapikicha uye wongororo
How kuzochera Nutcracker: inokwanisika nzira
Puroteni bvudzi kumba. Puroteni bvudzi kudzorerwa
Paveletsky Station: Station zano, kupaka, kufamba
Potassium dichromate - physicochemical zvivako uye munda chikumbiro
Sei kupenda vachena bvudzi kumba?
Chii kuona Kaliningrad? Museums, pazvivako, nhoroondo, mapikicha
Marianske Lazne. Pachipatara pacho akasiyana dzisina
How kuti ndege mu "Maynkraft" woita izvozvo?
Several nzira sei kutamba minimini mumwe
Yenhandaro: mifananidzo, hunhu uye unhu
Chii kubhururuka tsoka pamwe masitadhi?